Zvapupu zvaJehovha zvekuEurope
VANOGARAMO 741 311 996
VAPARIDZI 1 611 036
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 847 343
Kirasi Yakashanyira Imba yoUmambo
Finland: Vana vegiredhi 4 vanoshanyira Imba yoUmambo
Ines, musikana ari mugiredhi 4 kuFinland, akanzwa kuti vaizokurukura nezveZvapupu zvaJehovha pavaizoita zvidzidzo zvavo zvechitendero, saka akakoka kirasi yavo kuti ishanyire Imba yoUmambo. Vaaidzidza navo nemudzidzisi wacho vakaona kuti zvaiva nemusoro.
Vhiki yakatevera, vana 38 vakachovha mabhasikoro avo kwemakiromita angasvika 5, vachienda kuImba yeUmambo. Vadzidzisi vaviri pamwe chete nemutungamiriri wechikoro vakauyawo. Vakatambirwa paImba yoUmambo nehama mbiri nehanzvadzi nhatu. Pavakanga vachimbodyira dyira, vana ava vaibvunza mibvunzo ine chekuita neZvapupu uye Imba yoUmambo vachiti: “Chii chinoitwa pamisangano yenyu?” “Ko umo ndemechii?” Vakanga vachinongedzera kuraibhurari. “Sei pamadziro apo ‘6 akadhivhaidhwa na10?’” Vaitaura rugwaro rwegore urwo rwaibva pana Mateu 6:10.
Sezvo pachikoro ichi paine chirongwa chekuita kuti vana varege kushungurudzana, hama dzakaratidza kirasi yacho vhidhiyo yemakatuni yokudhirowa yakanzi Zvaungaita Kuti Vamwe Vsakudherera Asi Usingavarovi, iri pajw.org. Dzakavaratidzawo zvimwe zviri pajw.org ndokuvaridzira rwiyo rwumwe chete rweUmambo. Vakaita inenge awa vari paImba yoUmambo.
Mutungamiriri wechikoro, vadzidzisi, nevana vacho vakanakidzwa chaizvo nekushanya kwavakaita. Mutungamiriri wechikoro akafarira zviri pajw.org nekuti akaona kuti vaigona kuzvishandisa pazvidzidzo zvechitendero. Akafara paakaudzwa kuti mamwe makirasi akasununguka kuuyawo kuzoona Imba yoUmambo. Izvi zvakaita kuti mangwana acho, mudzidzisi weimwe kirasi akumbire Zvapupu kuti vauyewo kuzoona imba yacho.
Akawana Chinhu Chinokosha Panorasirwa Marara
Cristina, anogara kuRomania, haana kumboenda kuchikoro uye akanga asingakwanisi kunyora kana kuverenga. Aiva murombo zvokuti aitorarama nekutsvaga magaba nezvigubhu munzvimbo dzinorasirwa marara muguta. Rimwe zuva paaiita izvi, pane chinhu chaakaona chakamutora mwoyo. Akawana zvinyorwa zvinotsanangura Bhaibheri zvaiva nemifananidzo inoyevedza yevanhu vari kufara. Akangoti nechemumwoyo, ‘Vanhu ava vanofanira kunge variko kune imwe nzvimbo.’ Cristina aida kuziva zvakawanda nezvezvaiva muzvinyorwa izvi, saka akakumbira mumwe munhu kuti amuverengere. Paakanzwa kuti zvinyorwa izvi zvaitaura nezvenyaya dzechitendero, zvakamurwadza kuti vamwe vanhu vainge varasa zvinyorwa zvinotaura nezveShoko raMwari. Cristina akaramba achienda kunorasirwa marara achitsvaga mabhurocha, maturakiti nemagazini. Mamwe acho aiva nemapeji ese, asi mamwe acho ainge akabvaruka-bvaruka. Akadzidza kuverenga kuti azive zvakawanda nezvemabhuku aya.
Nekufamba kwenguva, Cristina akazosangana neZvapupu, akatanga kudzidziswa Bhaibheri. Akafara chaizvo kuona kuti Jehovha akanga aita kuti amuzive achishandisa zvinyorwa zvainge zvaraswa nevamwe vanhu. Ari kupinda misangano yeungano uye ari kunakidzwa nezvaari kudzidza. Chimwe chinomufadza chaizvo ndechekuti ava nemagazini matsva, mabhuku uyewo mabhurocha. Iye zvino haachafaniri kuatsvaga kumarara. Chokwadi, Cristina akawana chinhu chinokosha panorasirwa marara.
Chidzidzo cheBhaibheri “Chemusango”
Germany: Margret achiitisa chidzidzo cheBhaibheri musango
Mangwanani ega ega, Margret anofamba neimbwa yake mune rimwe sango rekuGermany. Anoti: “Ndinoedza kutaura nevanhu vandinosangana navo. Kana ndikaona kuti vari kutaurika navo, ndinochinja nyaya totanga kutaura nezveBhaibheri.”
Rimwe zuva akasangana nemumwe mukadzi ane makore ekuma70 uyo akanga achitofambawo neimbwa yake. Margret akatanga kutaura naye. Mukadzi uyu akanakidzwa, ndokuudza Margret kuti mazuva ose anonyengetera kuna Mwari uye anoverenga Bhaibheri. Kubvira ipapo, vaigara vachionana mazuva ose, vokurukura nezvaMwari. Rimwe zuva mukadzi uyu akabvunza Margret kuti: “Sei iwe uchiziva zvakawanda zvemuBhaibheri?” Margret akatsanangura kuti aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha.
Margret akaedza kanoverengeka kukumbira mukadzi uyu kuti vaite chidzidzo cheBhaibheri chepamusha, asi airamba. Kunyange zvakadaro, vakaramba vachikurukura. Pashure pemwedzi yakati kuti, Margret akakumbira zvakare mukadzi uyu kuti vaite chidzidzo cheBhaibheri chepamusha. Mukadzi uyu akabva abuda pachena, akataura kuti aitya kudzidza nekuti murume waaigara naye akanga asingafariri Zvapupu zvaJehovha.
Margret paakazoenda kusango zvekare neimbwa yake, akatakura Bhaibheri nebhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? Paakaona mukadzi uyu, Margret akataura neushingi kuti: “Nhasi handisi kukukumbirai kuti titange chidzidzo cheBhaibheri chepamusha asi chidzidzo cheBhaibheri ‘chemusango.’” Mukadzi uyu akabva angobvuma, misodzi yakayangarara. Iye zvino anouya kuchidzidzo cheBhaibheri “chemusango” ka6 pavhiki. Zvichienderana nemwaka nemamiriro ekunze, dzimwe nguva Margret anoitisa chidzidzo cheBhaibheri aine amburera netochi.
Kudzungudza Musoro Kusinganzwisisiki
Imwe hanzvadzi inonzi Delphine yaidzidza Bhaibheri naIrina wekuBulgaria. Irina aikoshesa zvaaidzidza uye aigara achipinda misangano. Asi murume wake akanga asingatombodi kuti ataure neZvapupu. Murume wake akabva aita kuti vatame vachinogara kune mumwe musha muduku wekuSweden, saka Irina akanga asisakurukure naDelphine. Zvisinei, mamwe mapiyona maviri, Alexandra naRebecca, vakasangana naIrina, uyo aisamboziva chiSwedish. Hanzvadzi idzi dzakashandisa kabhuku kaGood News for People of All Nations uye vakakumbira Irina kuti averenge mashoko arimo echiBulgarian. Paakapedza kuverenga, mapiyona aya akashandisa kabhuku aka kubvunza kana Irina aida kuwana mabhuku mumutauro wake. Irina akadzungudza musoro zvakasimba. Hanzvadzi idzi dzakabva dzaenda, dzichifunga kuti haafariri zveBhaibheri.
Alexandra akazoyeuka kuti Linda, uyo aiva chizvarwa chemuSweden asi achigara kuBulgaria, aizovashanyira mumavhiki aitevera. Akafunga kuti zvichida Irina aizoteerera chokwadi kana akachinzwa mumutauro wake. Pakasvika Linda, vakabva vaenda vose naAlexandra kunoona Irina. Irina akaudza Linda kuti usiku hwega hwega ainyengetera kuna Jehovha, achikumbira kuti amubatsire kuenderera mberi nechidzidzo chake cheBhaibheri. Irina aigara achifamba nebhuku rake rechiBulgarian raBhaibheri Rinombodzidzisei? Aida kuriratidza Zvapupu kana asangana nazvo munzira, asi haana kana waakamboonana naye. Hakusi kufara kwakaita Irina paakawana mamwe mabhuku echiBulgarian!
Linda akabvunza Alexandra kuti sei akanga afunga kuti Irina haafariri pavakaonana kekutanga. Alexandra akatsanangura kuti Irina ainge adzungudza musoro wake achiratidza kuti haafariri. Linda akanyemwerera akabva atsanangura kuti vanhu vekuBulgaria vanogutsurira kana vachireva kuti havasi kuda, asi vanodzungudza musoro kana vachireva kuti vari kuda. Saka, Irina ari kuramba achidzidza Bhaibheri muchiBulgarian, kusvikira paachazokwanisawo mutauro wechiSwedish. Ari kudzidza sei? Akazowana nzira yekukurukura naDelphine uye vanodzidza vachionana pavhidhiyo vachishandisa indaneti (videoconferencing).
Baba Vane Muenzaniso Wakanaka
Jemima, uyo anogara kuSpain, akatanga kudzidziswa chokwadi achiri muduku. Zvisinei, paakanga ava nemakore 7, upenyu hwake hwakashanduka. Amai vake vakasarudza kuti vakanga vasisadi kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha, uye vakabva varambana nababa vake. Ava nemakore 13, Jemima akarega kupinda misangano yeZvapupu uye akaramba kubatsirwa nababa vake kuti asimbe pakunamata.
Jemima paaikura, akatanga kupindira munyaya dzematongerwo enyika nemagariro evanhu, achiti airwira kodzero dzevanhu vaitarisirwa pasi. Gare gare, paakangoerekana apererwa nebasa, baba vake, Domingo, vakati vaigona kushanda naye pabasa ravaiita rokupenda.
Mumwe musi vachishanda vose, Domingo akakumbira Jemima kana aida kudzidza Bhaibheri. Asi akaramba, akavataurira kuti aizovaudza kana ava kuda. Ari pabasa rake rekupenda, Domingo aiteerera Bhaibheri nemagazini zvakarekodhwa, asi mwanasikana wake aiteerera mimhanzi yemusambo wepop nemaearphone.
Muna November 2012, Domingo uyo akanga aroorazve, akakokwa kuti azopinda Chikoro cheBhaibheri chevaKristu Vakaroorana. Jemima akashamiswa kuti baba vake vaizoenda kuchikoro cheBhaibheri kwemwedzi miviri vosiya zvimwe zvose, vozoendeswa chero kwavanenge vanzi vaende. Apa ndipo paakatanga kuona kuti chokwadi chainge chakadzama zvakadini mumwoyo mababa vake, zvikaita kuti ade kuziva kuti sei zvainge zvakadaro.
Jemima akasiya mimhanzi yake, ndokutanga kuteerera Bhaibheri nemagazini zvakarekodhwa zvaiteererwa nababa vake. Akatangawo kubvunza mibvunzo. Rimwe zuva Domingo paakanga akamira paradha achipenda, Jemima akati: “Muchiri kuyeuka here paye pandakati ndichakuudzai kana ndava kuda kudzidza Bhaibheri? Ndava kuda manje.”
Domingo akafara kunzwa izvozvo. Muna January 2013, vakatanga kudzidza kaviri pavhiki. Baba vake vakaenda kuchikoro chiya muna April, asi vakaramba vachidzidza naye, vachikurukura vachionana paindaneti. Pamusangano wekupedza chikoro chakapindwa nababa vake, Jemima aivapowo uye akanakidzwa chaizvo nepurogiramu yacho. Musi wa14 December, 2013, Jemima akabhabhatidzwa.
“Jehovha akandiitira mwoyo murefu chaiwo, uye ndinoziva kuti haana kumbondisiya,” anodaro Jemima. “Akandipa zvandisina kumbobvira ndawana munyika, shamwari dzechokwadi. Hama dzedu dzemunyika yose dzinoita kuti ndiwedzere kuona rudo rwakakura rwaJehovha.”
Kuremekedza Vamwe Kune Simba
Musi wa30 March , 2014, Vasilii, uyo ava nenguva yakareba achishanda paBheteri rekuRussia, aiparidza achishandisa kangoro kaiva nemabhuku pedyo nebazi ravo paakaona imwe motokari yemapurisa ichiuya yakananga kwaari. Mupurisa akabuda mumotokari iyi, akakumbira Vasilii zvakanakanaka kuti arege basa raanga achiita, sezvo pakanga paine vamwe vanogara munharaunda iyi vaitsutsumwa. Mumwe mupurisa akatora vhidhiyo yekukurukura kwavaiita. Vasilii akaona kuti zvakanaka kuteerera mupurisa uyu pane kuti ataure nezvekodzero dzake. Paiitika zvose izvi, pakanga patova nevanhu vakawanda vaipfuura vainge vamira kuti vaone zviri kuitika. Vasilii akabva aenda, asi papera mazuva maviri akakumbira kuonana nemukuru wemapurisa. Akabvumirwa kumuona. Pavaikurukura, Vasilii akamutenda nebasa rinokosha rinoitwa nemapurisa munharaunda yavo uye akatendawo kuti mapurisa ainge ataura naye zvakanaka, mazuva maviri ainge apfuura. Mukuru wemapurisa akaudza mutevedzeri wake kuti, “Mumakore ose 32 andashanda semupurisa, handisati ndambonzwa mumwe munhu achitenda basa ratinoita!” Pavaikurukura, Vasilii akabatsira mukuru uyu kuona kuti tinobvumirwa zvakakwana nemutemo kuparidza pachena. Mukuru wacho akabvunza Vasilii kuti, sezvo iye aiziva kuti ane kodzero yakakwana yekuparidza, sei asina kuramba zvakataurwa nemupurisa zvekuti arege basa rake? Vasilii akapindura kuti: “Ndinoremekedza mapurisa. Munofunga kuti vamwe vaizozviona sei kudai ndakaudza mapurisa iwayo kuti aisaziva mutemo.” Mukuru uyu wemapurisa nemutevedzeri wake, vakazvifarira chaizvo, uye vakaudza Vasilii kuti akanga asingazorambidzwi zvakare kushandisa kangoro kake kemabhuku.